Android को लागि LoL गेमप्लेको स्क्रीनशट र भिडियो लीक भयो | Androidsis
विवरण र लीग अफ लिजेन्ड्स वा एन्ड्रोइडको लागि एलओएलको एक भिडियो देखा पर्दछ
किंवदन्धि वा LL को लिग केहि वर्ष पहिले «Fortnite to हुन को लागी पीसीहरूको। एक सच्चा MOBA जसले आकर्षण गर्‍यो र सयौं हजारौं खेलाडीहरूलाई धेरै उपाध्यक्ष दियो। अब हामी नयाँ भिडियोको साथ यसको केहि विवरणहरू जान्न सक्दछौं जसमा तपाईं गेमप्ले देख्न सक्नुहुन्छ।
र आजसम्म उहाँसँग अनुयायीहरूको फौज छ। एक फौज कि यो मोबाइलमा सुरूवात भएको दिन संख्यामा वृद्धि हुनेछ, किनकि यो फेरि एकपटक सुर्खाहरूमा हुनेछ र आराम र स्मार्ट स्मार्टफोनबाट खेल्न सजिलो हुँदै।
1 तर लीग अफ द महापुरूष कुन खेल हो?
2 र अब एन्ड्रोइड र आईओएस को लागी
3 केहि थप विवरणहरू
तर लीग अफ द महापुरूष कुन खेल हो?
परभक्षी को लिग यो दशकको शुरुका बर्षहरूमा सबै टुक्रियो। २०१०, २०११ र २०१२ मा, यसले हजारौं खेलाडीहरू आफ्नो गेमप्लेमा कब्जा गर्‍यो जसले एलओएल बाहेक अरू केही खेल्दैन। एक खेल जसमा तपाईले अर्को खेलाडी अनलाइन सामना गर्नुपर्नेछ र खेलहरू जुन २० र between० मिनेटको बीचमा टिक्न सक्छ।
यो सबै च्याम्पियनहरू जोड्नुहोस् प्रत्येक टीमका प्रत्येक खेलाडीले लिन सक्ने र आज त्यहाँ १ 145 भन्दा बढी उपलब्ध छन्। हामी तथ्या about्कको बारेमा कुरा गर्दैछौं र हामी भन्न सक्छौं कि २०१२ मा यो थियो २०० मिलियन पंजीकृत खेलाडीहरू र त्यो २०१ 2013 मार्चमा विश्वभरि एकै समयमा यसमा connected मिलियन खेलाडीहरू जडित थिए।
यो उठेको खेल हो अर्को श्रेणीमा ईस्पोर्ट भनिने शब्द र त्यो आज प्रचलित छ। ट्विचले एलएलएल प्रयोग गर्‍यो र यसको प्रयोग गर्नेहरूको संख्या बढाउनको लागि र उनीहरूले खेलेको प्रतिस्पर्धी खेलहरूको नायकहरू मध्ये एक हो।
र अब एन्ड्रोइड र आईओएस को लागी
त्येसो भए तिमि सक्छौ पूंजी महत्त्वको राम्रो विचार प्राप्त गर्नुहोस् que यो अनलाइन खेलहरूका राजाहरूका आगमन हुन सक्छ प्रतिस्पर्धी तपाईको मोबाईलबाट, कहिँबाट पनि मल्टिप्लेयर खेल खेल्नुहोस् र राम्रो गति भन्दा बढीको साथ। यदि हामी आज टर्मिनलमा थप्छौं भने, मोबाइलका लागि लिग अफ लिजेन्ड्स महान हुन सक्छ।
केही घण्टा अघि धेरै स्क्रीनशटहरु लीक भएको छ र किंवदन्ती वा LL को मोबाइल संस्करण के हो भनेर एक भिडियो। यो Tencent हो जसले यसको विकासको ख्याल राख्दछ र PUBG मोबाइल संग के देखिएको छ पछि, यसलाई सफल बनाउनको लागि यो राम्रो हातमा भन्दा बढी हो।
च्याम्पियन चयन स्क्रिनमा तपाईं सक्नुहुन्छ अहिले प्लेमा २ characters पात्रहरू हेर्नुहोस्। ती हुन्: गेरेन, डा। मुन्डो, जिन्क्स, जिन झाओ, ओरियाना, जन्ना, एनी, नामी, ग्रेगास, अह्री, ब्लिट्जक्र्यांक, फिज, ओलाफ, श्यावना, ट्रेंडमरे, भि, माल्फीट, नासस, मिस फार्च्यून, इजरियल, मास्टर यी, ट्विस्ड भाग्य, Jax, Fiora, लक्स, Soraka र Vayne।
अवस्थित चैम्पियनहरू मोबाइलको लागि एलओएलको पहिलो संस्करणमा तिनीहरू यसका वर्षौं पहिलेको खेलको सुरूवातमा फिर्ता जाने जस्तो छ। भिडियोको थप विवरणहरू यो छ कि क्यामेरा लक गरिएको छ, पीसीमा नभई जहाँ तपाई यसलाई घुमाउन सक्नुहुनेछ युद्धको मैदान राम्रोसँग हेर्न र यसैले कुन टावरहरू जित्ने भनेर निर्णय गर्नुहोस्।
केहि थप विवरणहरू
हाम्रो च्याम्पियनको चाल यो भर्चुअल स्टिकको माध्यमबाट गरिन्छ र यो आफैं त्यो नियन्त्रणबाट टाढा हुन्छ जुन अन्य MOBAs मा हुन्छ जहाँ तपाईं जानु पर्दछ जहाँ पर्दामा थिचेर जानुहुन्छ। यहाँ तपाईं आफ्नो कम्पियनलाई आफ्नो कमाण्डको साथ पूर्ण नियन्त्रण गर्नको लागि नियन्त्रण गर्नुहुन्छ र तपाईंको एक हात उसको आन्दोलनमा पक्रियो।
त्यहाँ separate अलग बटन छन् जुन प्रत्येक सीपको लागि हो र ती मध्ये केही केहि ती शटहरू रिलीज गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। भिडियोमा देख्न सकिन्छ कि अन्य दुई अलग बटनहरू सम्मन अनुयायीहरू, स्वत: हमला, र पछाडि हो। इन्टरफेस मास्टर गर्न समय लाग्नेछ, तर त्यस पछि तपाईं Android का लागि LoL को मास्टर बन्न सक्नुहुन्छ।
अब हामीसँग मात्र छ LoL बाट थप समाचारहरू प्राप्त गर्न प्रतीक्षा गर्नुहोस् र यसको सुरुवातको लागि अघिल्लो दर्ता के हो। हामीलाई मिति थाहा छैन, तर सबै चीज नजीक आइरहेछ ताकि चाँडै नै हामी आज अवस्थित सब भन्दा प्रतियोगी खेलहरूबाट आनन्द लिन सक्छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड खेलहरू » विवरण र लीग अफ लिजेन्ड्स वा एन्ड्रोइडको लागि एलओएलको एक भिडियो देखा पर्दछ
नाइट क्वेस्ट एक अनौपचारिक खेल हो जसमा तपाईंलाई चेसका टुक्राहरूसँगै सर्नु पर्छ
के टेलिफोनी को दुनिया अब र वर्षको अन्त्य बीचमा हामीलाई पर्खिरहेको छ